विबादास्पद नायिका राखीले लिएकी थिइन् सर्जरीको सहारा ? – rastriyakhabar.com
विबादास्पद नायिका राखीले लिएकी थिइन् सर्जरीको सहारा ?
राखीले भनेकी छिन्– ‘मलाई मेरो परिवारले कहिल्यै पनि मनोरञ्जनको दुनियाँमा जाने अनुमती दिएन, जब म नाचेको देख्थे मलाई पिट्थे। जब म मुम्बई पुगेँ, मैले केही निमार्ताहरूका अगाडि नाच्न र प्रतिभा देखाउन शुरु गरेँ। केहिले ममाथि खराब नजर पनि राखे। मैले सोचेँ कि यस्ता मानिसका बीच नाच्नुभन्दा डान्सबारमा काम गर्न राम्रो हुन्छ।’ समाचारपत्रमा खबर छ ।
उनले भनेकी छिन्– ‘मैले धेरै फिल्ममा आफूलाई अस्वीकार गरेको यथार्थ भोगेपछि मैले आफ्नो रूपरंग सुधार्नका लागि सर्जरीको साहरा लिएँ ।’ राखी नयाँनयाँ हंगामा र चर्चाका लागि माहिर मानिन्छिन्।